Wednesday May 30, 2018 - 05:43:31 in Wararka by Super Admin
xabsiyada qarsoodida ah ee lagu tacdiibinayo dadka muslimiinta ayaa ku faafay deegaanno dhowr ah oo dhaca koonfurta wadanka Yemen, dowladda dabadhilifka imaaraatka carabta oo wakiil ka ah mareykanka ayaa la sheegay in ay geysanayso xasuuq iyo xadudub
Warbixinno cusub ayaa sheegaysa in dowladda imaaraatka ay xabsiyo gaaraya 18 xabsi ay ka hirgelisay Yemen waxaana xabsiyadaas loo dhaadhiciyay boqolaal qof muslimiin ah kuwaas oo ku eedeysan in ay ku lug leeyihiin dambiyo ay ugu yeereen argagaxiso.
Markii ugu horraysay ciidamo Mareykan ah ayaa la sheegay in ay ku lug yeesheen falal tacdiibin ah oo maxaabiis loogu geystay Xabsiyada qarsoodida ah ee Yemen.
Warbixin gaar ah oo ay faafisay wakaaladda wararka AP ayaa xaqiijinaysa in ciidamo mareykan ah ay ku lug lahaadeen tacdiibin iyo su'aalo weydiin ka dhan ah maxaabiista muslimiinta.
Ciidamada Mareykanka ah ayaa tagay dhowr xabsi oo kuyaal gobollada Xadramuud,Shabwah iyo Abyen ee koonfurta Yemen halkaas oo ay kuyaallaan xabsiyo qarsoodi ah waxayna ka qeyb qaateen falal tacdiibin ah oo saraakiisha dowladda imaaraatka carabta ugeysanayeen maxaabiis.
Wakaaladda oo soo xiganaysa saraakiil American ah ayaa faafisay in ciidamada mareykanka ah oo isku xir ka helayay saraakiil imaaraat ah ay falkan geysteen iyagoo ogolaashiyo ka helayay wasaradda gaashandhigga.
Saraakiil katirsan melleteriga Mareykanka oo diiday in magacyadooda la adeegsado ayaa u xaqiijiyay wakaaladda in ay ku lug lahaayeen falalka su'aalo lagu weydiinayay maxaabiista ku xiran xabsiyada qarsoodida ah ee Yemen balse waxay diideen in ay tacdiibin geysteen.
Sarkaal american ah ayaa yiri "waan ka qeyb qaadanayay su'aala weydiinta maxaabiista ku xiran xabsiyada Yemen balse madhicin wax xadgudubyo ah oo ka dhan ah eedeysanayaasha".
Markii arrintan soo shaac baxday waxaa ka hadlay golaha Koongareeska mareykanka oo udhigmo xildhibaanno waxayna sheegeen in wasaaradda gaashaandhiga ee Pentagoonka ay uballan qaadday in ay sameynayso baaritaanno.
Xabsiga Alrayaan ee gobolka Mukalla ayey warbixintu sheegaysaa in uu yahay meesha ugu daran ee saraakiisha American-ka ah ku tacdiibiyeen maxaabiista muslimiinta waxaana halkaas lagasoo calaamadeeyay in maxaabiista qaar lafara xumeeyay waxaana usii dheer jirdil aan kala joogsi laheyn, saraakiil american iyo imaaraat ah ayaa arrintan iska kaashaday.
xabsiyada 18-ka gaaraya dhammaantood waa qarsoodi waxayna ku dhaxyaallaan garoomo diyaaradeed,saldhigyo ciidan iyo jaziiradaha Yemen dhammaantoodna waxaa gacanta ku heysa dowladda imaaraatka carabta.
hay'adaha sheegta in ay udoodaan xuquuqul insaanka waxay leeyihiin sanad ka hor ayaa ladhisay guddi dabagal ku sameeya xadgudubyada ka dhanka ah maxaabiista iyo xabsiyada qarsoodida ah ee Yemen balse illaa iyo hadda waxba kamasoo naasaa caddaan oo tacdiibinta ayaa sii socota.